Kaomina Ambohitrolomahitsy : Mirongatra ny asan-dahalo -
AccueilSongandinaKaomina Ambohitrolomahitsy : Mirongatra ny asan-dahalo
Mihorohoro sy mandry andriran’antsy tanteraka ny mponina ao amin’ny kaomina Ambohitrolomahitsy, distrikan’i Manjakandriana, noho ny afitsok’ireo dahalo izay tonga manafika ny tanàna saika isan’andro. Tamin’iny herinandro lasa iny, dia fokontany tsy latsaky ny telo tao anatin’io kaomina voalaza io no nasesin’ireo olon-dratsy manodidina ny 30 isa, mirongo basy kalaky sy basim-borona. Tao amin’ny fokontany Ambohitrerana no nanombohan’izy ireo izany ka tokantrano tsy latsaky ny efatra, izay nahitana mpanao sarety, tompon’andraikitry ny fiangonana, ary mpivarotra no indray voaroba. Ankoatra ny entana madinidinika sy ny finday, dia noraofin’ ireo dahalo avokoa ny volam-piangonana sy ny vola karaman’ireo olona voatafika notehirizina tao an-trano. Araka ny fitantaran’ireo niharan-doza ihany koa, dia raim-pianakaviana iray no nodarohan’ireo olon-dratsy rehefa tsy namoaka ny vola notadiavin’izy ireo.
“Nivarotra kitay telo kamio io rangahy io ny andro nisehoan’ny fanafihana. Noheverin’ireo dahalo fa nandray vola izy ka nasain’izy ireo navoaka izany. Nilaza anefa io raim-pianakaviana io fa mbola tsy nisy lasa vola ny entana ka nodarohan’izy ireo”, hoy ny fanamarinam-baovao. Nitohy tao amin’ny fokontany Antsahabe ny asa ratsin’ireto dahalo, izay heverin’ireo mponina fa efa manana mpanome vaovao ireo, tamin’io herinandro lasa io. Tafo maromaro indray no nataon’izy ireo lasibatra tamin’izany.”Nojokojokoan’ireo dahalo, ireo vatan-dehilahy niambina ny tanàna ka nambanany tamin’ny basy, ary nampatorian’izy ireo tamin’ny tany, mandra-pahitana efitra nanidiana azy ireo. Nanaram-po nandroaka ny entana ireo andian’olon-dratsy taorian’izay”, hoy hatrany ny fitantaran’ny olona avy any an-toerana. Ankoatra ireo voatanisa etsy ambony, dia omby lehibe miisa dimy ihany koa no nangalarin’ireo malaso tao amin’ny tokantrano iray tao Ambohibemasoandro, ao amin’io kaomina io ihany, ary dia lasa nandositra nandao ny tanàna ireto farany. Hatreto aloha dia tsy mbola nahenoana trangam-pahafatesana na olona naratra mafy tany an-toerana, na dia eo aza izay firongatry ny asan-dahalo izay.
Matory any an-tsaha
Vao manomboka maizimaizina ny andro, dia misakafo hariva ireo olona efa nahazo taona, miaraka amin’ny zaza amam-behivavy, ary mibata gony sy lamba dia mamonjy matory any an-tsaha , noho ny tahotra ireo dahalo. Vatan-dehilahy no hany sisa tavela sy miandry ny tanàna. Raha ny voalaza hatrany aza, dia mitari-dositra mitsoaka ihany koa ireto farany noho ny fahatsapana fa atody miady amam-bato, vantany vao mahita ny fiavian’ireo olon-dratsy, izay manao rodobe hatrany. Ankoatra ireo izay efa niakatra an-drenivohitra, dia misy amin’ireo fianakaviana sasany ihany koa no misafidy hijanona ao an-tokantranony, saingy efa avoakan’izy ireo eo ambony latabatra dieny mialoha ny vola rehetra sy ireo entana heverina ilain’ireo olon-dratsy ireo. “Ireto ny vola, ary efa ao an-tokontany ao ny omby rehetra fa aza vonoina izahay”, hoy ny fitalahoan’ireo niharam-boina . Vantany vao dify moa ireo malaso, dia mampandre ny zandary ao amin’ity kaomina ity ireo fokonolona, saingy efa milamina ny tanàna vao tonga ireo mpitandro filaminana raha ny voalaza hatrany.